China Masinina fitifirana famaritana kely ho an'ny fikarohana siantifika amin'ny alàlan'ny famokarana fitaovana fanodinana ultrasonika sy fitaovana | Qianrong
Masinina famafazana famaritana kely ho an'ny fikarohana siantifika amin'ny alàlan'ny fitaovana fantsom-panafody ultrasonic
Ny fitaovana fitrandrahana fitrandrahana ultrasonika dia milina famafazana kely azo anaovana fanandramana fikarohana ara-tsiansa. Izy io dia mandray ny teknolojia fitifirana ultrasound QRsonic ho an'ny fitoviana avo lenta amin'ny sarimihetsika mikraoba ambany sy ambany nano. Ampiasaina be izy io ao amin'ny sela solika, selan'ny masoandro ary firakotra fitaratra. , Boriboritany elektronika ary indostria hafa.
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina, famokarana ary fivarotana singa mahery vaika mahery vaika ultrasonic sy andiana fitaovana feno fampiharana, mifantoka amin'ny rindranasa ultrasonic tsy misy fenitra. Ny fampiharana lehibe indrindra dia ny: famafazana ny fitrandrahana atomika ultrasonika, ny firakotra indium / ny fantsom-bozaka fanaronana, ny fanapahana ultrasonika, ny vahaolana amin'ny hafanana avo lenta, ny fanaparitahana / ny fanosehana / ny emulsification / ny homogenisation, ny plastika ultrasonika / ny vy, ny fantsom-pandrefesana / ny fanamafisam-peo / stitching seamless, fampiatoana ultrasonic, sns.
Fitaovana famafazana atomika ultrasonika: ampiasao ny herin'ny onja ultrasonika hanapotehana ny rano na ranon-javatra hamoronana poti-potika bitika misy mikrons marobe mihoatra ny 100 microns amin'ny habeny hahatratrarana ny hamandoana, ny famafazana rano, ny fampifangaroana, ny fampiroboroboana ny fihetsika simika, ny famafazana ary ny vy mitsonika Ireo mpankafy ny rafitra sy tanjona hafa.
Previous: 3000W Famonoana tombo-kase mafana amin'ny fantsom-panafody plastika ho an'ny tsipika famokarana famafana sivana
Manaraka: Teknolojia atomika fanodinana vovoka metaly ho an'ny vovoka tin amin'ny alàlan'ny Ultra Frequency High
Haavo 40Khz mihozongozona mahery vaika Rubbe ...
20Khz Ultrasonic Plastika welding milina ho an'ny ...